Wụnye griin haus n'ụlọ ma mee ihe kacha mma n'oge oyi | Bezzia
Wụnye griin haus n'ụlọ ma mee ihe kacha mma n'oge oyi
Maria onyekwere | 13/09/2021 20:00 | .Chọ Mma
Ọ ga-amasị gị nwee obere ogige? Ị nwere ike itolite nri nke gị site na mkpụrụ? Ị ka na -anụ ugbo n'ubi n'oge oyi? Griin haus n'ụlọ bụ ihe ngwọta iji chekwaa osisi na ifuru gị nke siri ike pụọ na oke oyi, mmiri ozuzo ma ọ bụ snow n'oge oyi.
Ugbu a oyi na -abịa Wụnye griin haus n'ụlọ! Ọ ga -enye gị ohere ịga n'ihu na -anụ ụtọ ọrụ ubi na ịkọ ugbo n'oge nke afọ a, yana inye gị ebe izu ike. Nzọ na ụdị ndị mara mma ma na -adịgide adịgide dị ka griin haus iko ma ọ bụ jiri ihe dị ọnụ ala mepụta griin haus nke gị.
1 Uru nke inwe griin haus n'ụlọ
2 Greendị griin haus
2.1 Nke iko
2.2 Nke plastic
2.3 Obere obere
Uru nke inwe griin haus n'ụlọ
Enwere ọtụtụ uru nke ịwụnye griin haus n'ụlọ, mana oyi bụ ebe anyị bi. Ka anyị sgaa n'ihu na -arụ ọrụ n'ubi anyị ma ọ bụ na osisi anyị n'oge oyi, na -echebe ndị a site na oyi. Nke ahụ nwere ike bụrụ nnukwu uru mana ọbụghị naanị ya.
Ọ bụ ihe eji achọ mma na ihe ịchọ mma. Ihe nwere ike ime ka ubi anyị maa mma.
Ọ bụ ebe kacha mma chebe osisi kachasị sie ike n'oge oyi iji gaa n'ihu na -ekpori ndụ ha n'èzí n'oge opupu ihe ubi.
Ọ bara ezigbo uru mgbe ị na -eto akwụkwọ nri anyị n'oge oge oyi na -atụ n'afọ. Ọ na -enye anyị ohere ịbawanye arụpụtaghị ihe na na -ekwe nkwa ihe ịga nke ọma nke cuttings na seedlings.
Ọ na -enye anyị ohere iji na -eto ụdị sitere na ihu igwe na -ekpo ọkụ na ebe okpomọkụ
Ọ pụkwara ịghọ ebe zuru oke ịnọ na mpụga site n'ụlọ na ezigbo okpomọkụ n'oge oyi na -atụ n'afọ. Naanị ihe ị ga -eme bụ idobe obere okpokoro akụkụ ya na oche oche ya.
Greendị griin haus
Ọrụ griin haus bụ mepụta gburugburu na -achịkwa (microclimate) ịchekwa ọnọdụ kacha mma nke okpomọkụ, iru mmiri na ọkụ ka osisi na ifuru wee too nke ọma ma chebe ya pụọ ​​na ihu igwe adịghị mma. Agbanyeghị, ọ bụghị ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ niile dị n'ahịa na -arụ ọrụ a n'otu ụzọ, yabụ ọ dị mkpa ịjụ onwe gị ajụjụ ole na ole tupu ịmalite ịzụrụ otu.
Kedu ihe mere ị ga -eji họrọ griin haus? Nke a bụ ajụjụ mbụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị ma ọ bụrụ na ị kpebiela idobe griin haus n'ime ogige. Ọ bụghị ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ niile na -enye ikuku dị mma ka ejiri ya mere ebe ntụrụndụ. Ọ bụghị ihe niile ka ejiri otu ihe ahụ rụọ, nke na -emetụta ma ịdị mma ya na, n'ezie, mmefu ego dị mkpa iji nweta otu.
E nwere ọtụtụ ụdị griin haus, dabere na ihe, nha, imewe ... Taa ebumnobi anyị bụ igosi gị obere ahịhịa ahịhịa nke ụfọdụ n'ime ha, nke kacha ewu ewu, ka ọ dịkarịa ala, ị ga -edo anya ebe ị ga -amalite ile anya.
The iko greenhouses enwe nnọọ anya aesthetic na nye mkpuchi kacha mma. Ha bụkwa ndị kacha ọnụ. Iko ahụ na -enye ọkụ dị mkpa maka uto nke osisi na nlele zuru oke site n'ime ruo na mpụga.
Ha bụ nhọrọ kacha mma maka ndị ọrụ ubi na -achọsi ike, kamakwa kacha dabara maka imepụta oghere ezumike n'èzí. Mgbe a bịara n'ịmepụta ndọtị nke ụlọ n'ime ogige, ha bụ ihe a na -achọkarị. Na -adịgide adịgide ha bụ nhọrọ na -adigide karịa nke ejiri ihe plastik mee.
E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche n'etiti ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere mkpuchi plastik. Ihe efere dị ka polycarbonate ma ọ bụ polymethacrylate, ha na -enye ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ siri ike nke enweghị ike nweta ya na ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri dị ka polyethylene (PE) ma ọ bụ polyvinyl chloride (PVC).
Ha adịghị mma dị ka enyo n'agbanyeghị na, ndị e ji efere efere adịghị anya na ndị a ma dị ọnụ ala. Na mgbakwunye, ha bụ ihe eji arụ ọrụ ka ọ dị mfe, yabụ bụrụ obere onye ọrụ n'onwe gị ị nwere ike wuo griin haus gị na -eji osisi na efere polycarbonate. Na weebụ, ị ga -ahụkwa ihe niile site na atụmatụ ruo na nkuzi ịmara ka esi eme ya.
Ma n'otu ihe ma na ndị ọzọ ọ ga -ekwe omume ịchọta, na mgbakwunye, obere griin haus dị ka ndị ahụ e gosiri na foto. Ọ bụrụ naanị na ịchọrọ oghere iji chekwaa osisi gị n'oge oyi, iji nwee ike ịmepụta obere mkpụrụ ma ọ bụ kụọ akwụkwọ nri ole na ole, nke a bụ ezigbo ngwọta. Onwe m, enwere m mmasị na nhọrọ agbakwunyere na facade, ị?
Chọọ otu ebe dị mma maka griin haus, Na-enweghị nnukwu ndò nke osisi ma ọ bụ ụlọ ka ọ na-enweta opekata mpe awa 6 n'ụbọchị, tụọ oghere nke ọma wee wụnye griin haus n'ụlọ- ị ga-enweta ọtụtụ ihe na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Wụnye griin haus n'ụlọ ma mee ihe kacha mma n'oge oyi
Kedu ihe kpatara ekwesịghị ntụkwasị obi mmetụta uche